Ny Bara dia vondrom-poko malagasy monina any amin' ny faritra atsimo amin' ny lembalemba afovoan' i Madagasikara, ao amin' ny faritra Ihorombe sy Atsimo Andrefana ary Anosy. Toerana midadasika no misy azy ireo, voafaritry ny renirano Zomandao any avaratra (mampisaraka azy amin' ny Betsileo), ny faritra onenan' ny Tanala any atsinanana, ny ony Onilahy any atsimo andrefana (mampisaraka azy amin' ny Antandroy sy amin' ny Mahafaly), ary ny havoanan' Analavelona ao andrefana sy avaratra-andrefana. Ny tanàna lehibe any amin' ny Bara, dia i Sakaraha, i Ranotsara, Ivohibe, Ihosy, i Ranohira, Ankazoabo, i Betroka ary i Beroroha.
Ny Bara no vondrom-poko lehibe indrindra amin'ny vahoaka mpiompy omby eto amin' ny Nosy ary miaina amin' ny fomba mifindra monina, na dia mitombo aza ny ampahany amin'ny fambolena. Ny fiarahamonina bara dia tena entin' ny raibe ary ny fanambadian' ny mpihavana sy ny fampiradesana dia fanao amin'ny foko bara sasany. Mangalatra omby ny tovolahy mba hanaporofoana ny maha-lehilahy azy alohan'ny fanambadiana, ary nalaza manerana ny Nosy ny dihy nentin-drazana kilalaky sy dihy mifandray amin'ny mpangalatr' omby.
Ara-tantara ny Bara dia nalamina ho fanjakana maro nifandraika tamin'ireo andriana avy amin'ny tarika Zafimanely. Niray saina teo ambanin' ny mpanjaka tokana izy ireo tamin’ny faramparan’ny taonjato faha-18 talohan’ny nirotsahany ho fanjakana nifaninana indray. Nandritra ny taonjato faha-19, ny fandraisan' ny Bara anjara tamin'ny varotra andevo sy omby ary fanafihana tany amin'ny faritany teo akaiky dia nahita ny fitomboan'ny hareny sy ny fahefany na dia teo aza ny fikambanana ara-pôlitika nizarazara. Io hery ara-toekarena io no nahafahan’ny Bara nihazona ny fahaleovantenany tamin’ny fanitaran' ny Fanjakan' Imerina fahefana ary nanohitra ny fahefana frantsay efa ho folo taona taorian’ny fanjanahan-tany tamin’ny taona 1896. I Andre Resampa, mpitarika ara-pôlitika matanjaka tamin’ny tetezamita ho amin’ny fahaleovantena ho an’i Madagasikara tamin’ny 1960, dia avy amin’ny ny foko bara.
Tombanana ho 520 000 ny Bara eto Madagasikara tamin’ny taona 2000, izay manodidina ny 3 %n' ny mponina malagasy, ary izy ireo no mpiompy sy mpivarotra omby betsaka indrindra eto amin’ny Nosy.
1 Ny maha izy azy ny Bara
2 Ny faritany bara sy ny fizaràn' ny vondrom-poko bara
2.1 Ny faritany bara
2.2 Ny fizaràn' ny vondrom-poko bara
2.2.1 Ny Bara Imamono
2.2.2 Ny Bara Manambia
2.2.3 Ny Bara Zafimanely
2.2.4 Ireo foko bara hafa
3.1.1 Ny lovantsofina momba ny fiavian' ny Bara
3.1.2 Tantara misongadina
3.2.5 Andriamanely sy ny taranany
3.2.9 Tonanahary, mpanjakan' ny Bara Be
3.2.12 Ratsimivily, mpanjakan' ny Bara Imamono
3.2.15 Ratsimamotoa sy ny zanany, mpanjakan' ny Bara Iantsantsa
5.2 Fombafomba fandevenana
5.3 Dihy sy mozika
9.1 Boky azo anovozan-kevitra
Ny maha izy azy ny BaraHanova
Ny anarana hoe Bara dia avy amin'ny fiteny banto ary midika hoe "ireo ao anatiny". Miaraka amin' ny Sakalava sy ny vondrom-poko vitsivitsy hafa, ny Bara dia iray amin' ireo vondrom-poko malagasy manana fiaviana banto mazava sy be mpahalala. Ao amin'ny faritra atsimon'ny lembalemba afovoan' i Madagasikara, ao amin' ny Faritanin' i Toliara (Faritra Atsimo-Andrefana sy Faritra Anosy) sy Finarantsoa (Faritra Ihorombe), indrindra any amin' ny faritra Ihosy-Betroka, izy ireo no tena monina. Tombanana ho 520 000 izy ireo tamin' ny taona 2000.
Ny faritany bara sy ny fizaràn' ny vondrom-poko baraHanova
Ny faritany baraHanova
Ny fizaràn' ny vondrom-poko baraHanova
Ny Bara ImamonoHanova
Ny Bara ManambiaHanova
Ny Bara ZafimanelyHanova
Ny Bara Zafimanely (na Zafimañely) dia taranaky ny mpanjaka Andriamanely sy ny mpanaraka azy.
Ireo foko bara hafaHanova
Ny lovantsofina momba ny fiavian' ny BaraHanova
Foko avy tany atsimo-atsinanan' i Madagasikara ny Bara sy ny filoha nitarika azy. Avy tany am-bavaranon' i Mandrare izy no nianavaratra nankany am-bavaranon' i Mananara. Avy tany indray izy no niankandrefana nihazo an’Ivohibe ka nihoatra an’ Isalo ary nifindra tsikelikely ka tafapaka hatrany Analavelona any am-pita andrefan’i Fiherenana. Ny razambe fantatra anarana nitarika azy ireo dia Rakanjobe sy Ravatoverere. Samy razan’ ny Zafimanely nanjaka fotoana ela tany amin' ny tanin' ny Bara i Rakanjobe sy Ravatoverere.
Ny tantaran' ny Bara dia nanomboka teo amin' ny renirano Ihosy tao amin' ny faritra Arindrano ao atsimo-andrefan' i Madagasikara, akaikin' i Toliara.
Tsy dia fantatra loatra ny vanim-potoana voalohany tamin' ny fananganana ny maha Bara ny Bara, ankoatra izay dia nifanojo tamin' ny fiforonan' ny tarana-mpanjaka maroserana tamin' ny Sakalava ary nisy andriana bara sasany avy amin' ny Maroserana. Io rafitra niorina amin' ny ara-tsôsialy tamin' ny fanjakana voalohany io dia inoana fa nanana fitsipika nalemy na tsy nisy fitsipika mifehy ny fifandimbiasana. Manodidina ny taona 1640 tany ho any no nisy andriana iray tao amin' ny Mahafaly nanafika ny faritanin' ny Bara ary nametraka ny fianakaviany ho mpitondra tamin' ny anaran' ny tarana-mpanjaka Zafimanely. Izany dia fametrahana tsy tian' ny Bara maro, ka nahatonga azy ireo hifindra monina anatiny ho any amin' ny faritany vaovao. Niorina mafy ny fahefan' ny Zafimanely taorian' ny nahafatesan' ilay andriana mahafaly tamin' ny taona 1653, saingy ny fifaninanana sy ny hambompo no nitarika ireo olom-baovao ireo hirotsaka amin’ ny ady fitondrana hatramin' ny taona 1680 tany ho any, ka nanakorontana be ny fiainana tao amin' ny faritanin' ny Bara (Ibara). Anisan' ny nahatonga izao tsy fandriam-pahalemana izao ny tsy fisian' ny hetra, ka nahatonga ireo andriana zafimanely nanao bemidina tamin' ny fandrobana omby sy fampandoavana lamandy lafo an' ireo mpandika lalàna izay niteraka disadisa anatiny sy ivelany.
Manodidina ny taona 1800 tany ho any no nisehoan’ ny mpanjaka zafimanely antsoina hoe Raikitroka Ratsileondrafy izay nametraka didy aman-dalàna vaovao nanamaivana izany disadisa izany ary nitondra ny fitoniana sy ny firindrana. Taorian' ny nahafatesan' i Raikitroka dia nizarazara ho fanjakana sy fanapahana maro ny fitondrana; tamin' ny 1895 ny Bara dia nalamina fara-fahaleliny ho fanjakana telo lehibe sy fanjakana roa antonony ary fanjakana kely maherin' ny 24. Io fiovana io dia tsy mifandray amin' ny antony ara-toekarena (ny Bara amin' ny ankapobeny dia nitombo harena noho ny varotra iraisam-pirenena sy ny fanafihana an' Imerina tamin' ny faramparan' ny taonjato faha-19) fa noho ny fiparitahana sy ny fitomboan' ny isan' ny Bara tsikelikely mankany amin' ny lemaka somary tsy misy mponina any andrefana sy atsimo ary avy eo dia mitombo ny halaviran' ny mponina miparitaka amin' ny foibe nentim-paharazan' ny herin' ny Bara. Na dia nahavita nanangana trano miaramila merina tao Ihosy ny mpanjakavavy merina Ranavalona I, ny fakana tany nataon' ny miaramilan' ny Fanjakan' Imerina tamin' ny taonjato faha-19 dia tsy nahomby tanteraka tamin' ny Bara. Niasa avy tao amin' ny toby tao Ihosy ny miaramilan' ny Merina, izay niezaka ny hametraka ny heriny tamin' ny Bara tamin' ny alalan' ny fanomezana fanohanana ireo mpanjaka bara matanjaka kokoa amin' ireo mpifanandrina aminy amin' ny ezaka hitazomana ny fiarahana amin' ireo mpitarika matanjaka afaka mifehy ny Bara amin' ny faritany tsy azon' ny Merina. Na dia eo aza ny fiparitahan' ny fahefan' ny Bara, tamin' ny fiafaran' ny taonjato faha-19, ny Zafimanely misy andriana mitondra, na dia nitsitokotoko, dia anisan' ny hery pôlitika matanjaka indrindra teto amin' ny Nosy, nifandraidraika amin' ny an' ny Sakalava sy ny an' ny Merina.
Rava ny Fanjakana Zafimanely tamin' ny fanjanahan' ny Frantsay ny Nosy nanomboka tamin' ny taona 1896. Nosamborin' ny Frantsay ny mpanjakan' ny iray amin' ireo fanjakana bara malaza indrindra, mpitarika antsoina hoe Ramieba, noho ny fitarihany ny Bara tamin' ny fikomiana nataon' ny Menalamba tamin' ny taona 1897. Nanimba ny fiheveran' ny Bara ny Frantsay, izay mety ho noraisina ho mpandresy an' ireo mpanjaka merina nankahalain' ny maro, izany. Taorian' ny nandresen' ny Frantsay an' i Madagasikara dia niezaka mafy ny hametraka fahefana tao amin' ny faritanin' ny Bara ny Frantsay, niaraka tamin' ny fikomiana matetika nataon' ny Bara teo anelanelan' ny Jona 1897 sy ny fitroarana faobe tany atsimo tamin' ny taona 1904 sy1905.
I Andre Resampa, mpanao pôlitika ao amin' ny Bara, no anisan' ny nisongadina tamin' ny fananganana ny antoko Parti Social Démocrate (PSD) ho an' ny fahaleovantenam-pirenena tamin' ny taona 1960. Rehefa lany ho filoha voalohan' i Madagasikara i Philibert Tsiranana tamin' ny 1 Mey 1959 dia lasa sekretera jeneralin' ilay antoko i Resampa. Tamin' izany andraikitra izany dia nitarika ny famelomana indray ny fokonolona izay rafi-pifehezana nentim-paharazana izy, ary nitarika ezaka mahomby hampitomboana isa ny mpikambana ao amin' ilay antoko.
Ireo mpanjaka nalazaHanova
Lehilahy fotsy hoditra hono Rakanjobe ary lazain' ny mpitantara fa Vazaha vaky sambo tany amorontsiraka atsimo atsinanana tany. Ny sasany indray milaza fa mpiavy avy tany Ile Bourbon (La Réunion) izy. Naka vohitra tao Andrizaha, tao Ivondro Rakanjobe mianakavy ary noho ny fahalalany an' izany Lacase izany, dia nahazo basy sy fiadiana mahery maro izay nentiny nampanaiky ny foko manodidina azy tany amoron' Ionaivo.
Rapapango na Rafiraraza sy AndriamenaHanova
Niteraka lahitokana Rapapango dia Andriamena. Niala tany Inongy i Andriamena ka nifindra tao Ranomena, renirano sampan' i Menarahaka ao atsimon' Ivohibe. Volambita no anaran' io faritany io. Tamin’izany izany no niantombohan’ny varotra basy nataon' ny Anglisy ka omby 14 ka hatramin’ny 16 no takalon’ny basy iray. Niteraka telo Andriamena, dia Adriamandàna, na Andriamanetaka, Rebiby ary Andriamanely.
Andriamanely sy ny tarananyHanova
Andriamanely no isan’ ny mpanjaka nalaza indrindra (taonjato faha-17). Taorian’ ny nahafatesan’ Andriamandàna zokiny dia nipetraka tao Ranotsara Avaratra ary hatramin’ izay dia isan’ ny renivohitra bara nalaza io tanàna io. Andriamanely dia nampiaiky ny foko maro nanodidina an’ i Betroka. Novàny ho Volambita ny anaran’io faritany io ho fahatsiarovana ny tany niavian’ ny tany Ranomena. Ny Tsienimbalala, vahoakan’ ny Zafindravola no novantaniny tao, niady taminy ary resiny sy nahazoany babo betsaka, olona sy omby (1649).
Niteraka telo Andriamanely dia Andriamanafotsarivo, razan’ ny mpanjaka bara maro; Ratsimive, razan’ny mpanjaka Bara Vinda tao Beroroha; ary Andriampanolahy, nipetraka tao Tsitondroina. Tafara-manjaka, anankiray tamin’ny zafin’ Andriampanolahy no nanjaka tao Tsitondroina hatramin'ny nahatongavan’ ny Ambaniandro izay nanosika azy nifindra nankany Mandronarivo, avaratr’ i Beroroha.
Nandimby an-drainy tao Ranotsara Avaratra i Andriamanafotsarivo. Ratsimive zandriny kosa dia lasa nipetraka tany amoron’ Ionaivo. Kanjo nony afaka kelikely dia niverina Ratsimive nanao izay hanilihana an-jokiny sy handraisana ny fanjakana tao Ranotsara. Raikitra ny ady. Resy Andriamanafotsarivo ka nandositra nialoka tany amin’ny mpanjakan’ny Tanala izay havan’i Vohilakatsy reniny. Maty tamin’io ady io ny anankiray tamin'ny zanany.
Mba hamaliana faty io zanany io, dia lasa Rambahira, vadin’ Andriamanafotsarivo, niantso ny Sakalava havany tany Betsiriry hanampy azy hanafika an-dRatsimive. Dia raikitra indray ny ady. Maty Ratsimive ary resy ny tafiny. Ramitongoa, anankiray tamin’ny zanak’ Andriamanafotsarivo no nahafaty azy. Tafaverina nanjaka tao Ranotsara indray Andriamanafotsarivo. Nony elaela taty aoriana dia nifindra monina nankany amoron'i Sakamare ny iray tamin’ny zanak’i Ratsimive, nitarika mpiady roanjato lahy ka nanorina ny fokon’ny Bara Vinda tao Benenitra.
Nony niala Ramitongoa dia Rakitroka Ratsileondrafy rahalahiny no nanjaka. Mpiady mahery, nampitovian’ny olona tamin’ Andriamanely i Rakitroka Ratsileondrafy. Mbola notafihiny indray ny Tsienimbalala ka resiny ary nahazoany babo betsaka, olona sy omby. Taorian’io fahavoazana io, dia nandositra niankandrefana nanalavitra ny Bara ny Tsienimbalala ka tonga tany Mikoboka any akaikin’i Toliara.
i Tonanahary, nanorina ny foko Bara Be sy nanjaka taminy;
i Tsimiovy na Andriamanely nanjaka tamin’ny Bara Manandàna;
Tonanahary, mpanjakan' ny Bara BeHanova
Mpanjaka nahery setra sady be rehareha i Tonanahary ka tsy tian' ny olony. Nanao zava-pady nahatezitra indrindra ny rahalahiny izy tamin'ny nakany ny anankiray tamin’ireo vadin-drainy nilaozany maty. Tezitra Ratsimivily sy Ratsimamotoa rahalahiny ka notafihiny i Tonanahary ary resiny. Taorian’io ady io dia lasan-dRatsimamotoa i Ranotsara ary Ihosy kosa lasan-dRatsimivily.
Nony resy Tonanahary dia nanatona an’i Varamena, mpanjakan'ny Tanala nitady fanampiana taminy hiverenany amin’ny fanjakany novolany tamin-drainy. Nohararaotin-dRatsimivily ny tsy naha-teo an-toerana azy ka noravany sy nobaboiny i Mikaiky, renivohitr’i Tonanahary. Lasa babo ny iray tamin’ny zanany.
Nony ren-dRadama izany dia sady tsy nanome rariny an’i Tonanahary izy no tsy nanampy an-dRatsimivily. Nohararaotiny aza ny adin’izy telo mirahalahy (Tonanahary, Ratsimivily ary Ratsimamotoa) mba hametrahana miaramila tany amin' ny tanin' ny Bara. Koa nandefa an-dRainiharo nitondra miaramila zato lahy izy ka nametraka azy tao Ihosy. Nasainy nampandry tany sy nanala ny fiadiana rehetra tany amin’ny mponina hatrany Ranotsara ireo miaramila tao Ihosy ireo.
Retsila no nanjaka nandimby an-drainy. Tao Ranohira no nofìdiny hipetrahana mba hahazoany tsara misakana ny Merina. Tia ady sady mahery an'ady Retsila. Samy niadiany avokoa na ny Mahafaly, na ny Betsileo, na ny Merina. Nanafika ny toby miaramila merina tao Andranay tao akaikin' i Fianarantsoa izy no maty voan’ny balan-tafondro.
Ratsimivily, mpanjakan' ny Bara ImamonoHanova
Ratsimivily no mpanjaka nahatonga ny Bara Imamono ho fanjakana nahery indrindra teo amin’ny samy Bara. Tao Anjia tao amoron’ny reniranon' Ihosy izy no nipetraka voalohany. Natosik’i Retsila zana-drahalahiny niala tao izy ka voatery nikisaka niankandrefana nanatona tany tsara kijan’omby natao hoe Tsimamonolongo. Nampanaiky an’i Sahamavaka sy Ilovo izy. Tsara ny fihavanany tamin’i Marentoetse, mpanjakan'i Fiherenana. Fa nony maty Ratsimivily dia tsy notohizan’i Rehandry intsony izany fihavanana tsara izany. Andriamanalina no anarana niantsoana azy taorian’ny nahafatesany.
Nandimby an-dRatsimiviiy rainy Rehandry. Tamin’ny andron-drainy dia efa nanaiky azy ny Sahamavaka sy Ilovo ary tamin’izany dia efa i Rehandry no nitondra ireo faritany roa ireo. Tamin’ny 1850 dia nalefany Ikely zanany lahy, niaraka tamin’ny mpanolo-tsaina sy ny miaramila, nikarakara ny ombiny marobe tany Ampanihy. Nanorina tanàna vaovao Ikely ary izany no niandohan’ny tanànan' Ankazoabo.
Ny ady tamin' ny Masikoro (1859)
Nony afaka kelikely anefa dia nifanampy i Fitolia avy any an-dohan’i Fiherenana sy Somongay, mpanjakan’ny Masikoro, ka nanao valin’ady. Nony ren-dRehandry fa niomana hamely azy Fitolia sy Somongay dia nanao tanàna mimanda tao Ampihamy izy hisakanana ny fahavalo. I Somongay koa nanao ho azy tao Besavoa. Dia samy namory ny havany ny an-daniny roa. Raikitra tao Tongobory ny ady. Avy tampoka ny orambaratra tamin’izay ka nisy vitsivitsy matin’ny varatra. Samy raiki-tahotra ny an-daniny roa ka samy namonjy ny mandany avy, tao Ampihamy sy tao Besavoa.
Tamin’izay dia tonga nampihavana ny roa tonta Rasambatra, vadintany nalefan-dRainisoamialy, goverinora tao Ihosy. Nanaiky ny fanelanelanana Rehandry fa i Somongay nandà ka dia nitohy ihany ny ady. Lany vanja sy bala anefa ny Masikoro ka resy ary maty i Somongay ka fito volana taty aoriana vao nalain’ny havany ny fatiny ka nalevina tao am-pasan-drazany ao Ambohibola.
Taorian’ny nandresen-dRehasy ny Masikoro, dia nomeny tany any Fiherenana Ikely zanany ary nafindrany taminy ny anarany hoe Rehandry fa izy kosa naka ny anarana hoe Lehimanjaka. Dia niala tany Ankazoabo Ikely - na Rehandry II - ka nonina tao Antevamena tao amin’ny tany nomen- drainy azy.
Ny ady faharoa tamin' ny Masikoro (1875)
Mbola nirehitra indray ny adin’ny Bara sy ny Masikoro tamin’ny 1875. Tamin'ity ady faharoa ity Lehimanjaka dia nifanampy tamin’i Reba, rahalahin-drain'Isambo, mpanjakan’ny Bara Iantsantsa. Tonga hatrany Befandriana Atsimo ny tafika nentin’i Lehimanjaka ary nahazo omby babo an'arivony.
Nony vita ny ady dia novoriny ny vahoaka mbamin’ny mpifehy sy ny zanakandriana ka samy notolorany izay anjara taminy avy ny zanany. Rehandry II no notendreny ho mpanjakan'ny Bara Imamono. Ny mpanjaka sisa, mbamin'ny mpifehy, na dia samy nahaleo tena aza dia nasainy nanoa an-dRehandry II. Fotoana fohy taorian'izay dia maty Lehimanjaka. Rehandry II kosa dia niova anarana hoe Impoinimery fa ny anarany hoe Rehandry II dia nafindrany tamin' Iatahiry zanany.
Tamin'ny 1873, roa taona talohan'ny nahafatesan'i Lehimanjaka rainy, dia nanafika ny Sakalava sy ny Merina tany Mahabo i Rehandry II ka nahazo babo omby an'arivony tany. Nandefa miaramila arivo lahy nanenjika ny Bara ny Merina, nitondra tafondro anakiray, teo ambany fifehezan-dRabebosika. Resin'ny Bara anefa io tafika io ka niparitaka nandositra.
Taorian’izay indray dia nitondra tafika marobe sady tsara fiadiana Ravoninahitriniarivo 15 voninahitra. Tsy namely na nanenjika ny Bara avy hatrany anefa Ravoninahitriniarivo fa nampiantso ny mpanjaka bara rehetra ka nifampidinika taminy. Vita ny raharaham-pihavanana ary nanaiky an-dRanavalona II ho mpanjakan' i Madagasikara ny Bara sady nanonitra ny omby nalainy tany Mahabo. Natao ny velirano ary nisy lamba landy tsara tarehy avy tamin-dRanavalona nomena ny mpanjaka bara. Koa tamin’ny 09 Septambra 1873, dia nanoratra taratasy tany amin-dRanavalona II izay tany Fianarantsoa tamin’izay Ravoninahitriniarivo, nilaza taminy fa mandry ny tany any Ibara. Niverina nankany Antananarivo i Ravoninahitriniarivo ary nisy zanaka mpanjaka roa nalefan’ny Bara hianatra any Antananarivo.
Tsara fihavanana tamin’ny goverinora merina tao Toliara Impoinimery. Niady tamin’ ny Bara Ambiliony tao Sakaraha sy tamin’ i Tompoemana mpanjaka masikoro tao Manombo koa izy (1894).
Taorian’ny niakaran’ny Frantsay dia voatendry ho goverinoran’ ny distrikan' Ankazoabo Impoinimery. Nifankahazo tsara tamin’ny Frantsay izy. Tamin’ny 1909 Impoinimery no niamboho.
Ratsimamotoa sy ny zanany, mpanjakan' ny Bara IantsantsaHanova
Nandimby an’Imasoandro indray dia i Tsimanompo. Mbola niady ny Tsienimbalala ihany indray i Tsimanompo. Nony resy ny Tsienimbalala dia lasa nifindra any am-badika andrefan' Analavelona.
I Rainibahy no nandimby an’ i Tsimanompo. Nanampy an’Impoinimery izy tamin’ny adin’ny Bara sy ny Masikoro.
Nahay niaro ny fahaleovantenany ireo mpanjaka telo mianaka nifandimby ireo. Nasiaka sy nahery setra anefa i Rainibahy ka naongan’ny vahoaka tamin’ny 1887. Isambo no nandimby azy. Isambo dia nalaza tamin’ny fanoherana ny Frantsay ka tamin’ny 1897 vao resy.
Ny fiaraha-monina bara dia voarafitra ho vondrona maro mifototra amin' ny razana iombonana. Nivondrona ho foko dimy lehibe ireo. Ny telo lehibe sy mahery indrindra dia ny Bara Be sy ny Bara Imamono ary ny Bara Iantsantsa, izay niara-nipetraka tamin' ny Vinda sy Antivondro vitsy kokoa. Miaina fomba fiaina mifindrafindra toeram-pivelomana izy ireo, amin' ny fiandrasana omby, ary izy ireo no lehibe indrindra sy manan-danja indrindra amin' ny vondrom-mpoko malagasy mpiandry omby. Tao Ihosy ny renivohitry ny Bara. Ny fiainam-piarahamonina dia nalamina tamin' ny fomba nentim-paharazana manodidina ny fitsipika tsotra sy fitsipika henjana, saingy nivaha izany nanomboka tamin' ny fiandohan' ny taonjato faha-20 satria ny fitomboan' ny mponina dia nanery ny fifindra-monina sy ny fiparitahana ny Bara hiala amin' ny tanindrazany taloha. Toy ny any amin' ny faritra hafa eto Madagasikara dia nizara ho sokajy telo ny fiarahamonina bara: andriana sy olon-tsotra ary andevo.
Ny fiarahamonina dia mijanona ho entin-dray, ary fanao matetika ny fananana vady maro. Misy ihany koa ny fifanambadiana anatiny amin' ny foko bara sasany. Ny lehilahy loham-pianakaviana matetika dia manana andraikitra roa amin' ny maha-mpitarika ara-panahy ao an-tokantrano. Taloha, ny zo amin' ny lova dia nanome tombony be ny lehilahy; norarana tsy handova zavatra hafa ankoatra ny fananana azo hetsehina ny zanaka vavy. Nofaritana hentitra ny andraikitry ny lahy sy ny vavy. Niasa tanimbary, nividy na nihaza hohanina, nanangona kitay, nanamboatra ny tranon' ny fianakaviana sy ny fanaka, ary niady hevitra momba ny raharaham-panjakana ny lehilahy. Ny vehivavy no tompon' andraikitra amin' ny fambolena hamidy na hohanin' ny fianakaviana, ny famafazana vary, ny fijinjana sy ny famotsiana ny vary, ny fantsakana rano, ny fandrehetana afo sy ny fikarakarana sakafo isan' andro ary ny fanenomana. Vao tamin' ny faramparan' ny taonjato faha-19, dia voarara tsy hihinana ny vehivavy mandra-pahavitan' ny fihinanan' ny lehilahy, ary tsy afaka nijery azy ireo eo am-pisakafoana.
Amin' ny fahaterahana dia mazàna no manatona ombiasa ny fianakaviana mba hamantarana raha tsara na ratsy vintana ilay zaza teraka. Raha io farany io no mitranga, dia natao ny fanalana vintana izay ampidirana ilay zaza amin' ny ranon' ny lakandrano izay hitondran' ny reniny azy, ary raha heverina fa mahery loatra ny vintany ka tsy afaka mandresy izany ny fanalana vintana, dia avela eo ambony votry (tranom-bitsika) ny zaza mba ho faty.
Na dia Kristiana aza ny Bara sasany, ny ankamaroany dia mitazona ny finoany ara-pivavahana nentim-paharazana. Noheverina ho masina ny hazo madilo na kily ary ambolena teo akaikin' ny tanànana bara maro, izay anateran' ny mponina fanatitra toy ny tsihy voatenona, ny volon-doha, akorandriaka ary zavatra hafa rehefa manao vavaka na rehefa vita ny fangatahan' izy ireo. Noheverina ho masina ihany koa ny hazo bontona (Adansonia) ary mamatotra ody eny amin' ny rantsan-kazo ny mponina rehefa manao vavaka. Ny tanàna tsirairay koa dia nanana hazomanga, andry hazo noheverina ho toerana masina indrindra amin' ny fanompoam-pivavahana, izay natao ho toy ny alitara ho an' ny besinimaro amin' ny fiaraha-mivavaka sy ny fanatitra. Matetika 20 ka hatramin' ny 30 m ny haavon' ilay andry ary nahantona teo an-tampony ny vona iray misy ahitra sy fasika ary poti-kazo masina. Ny lehilahy bara dia manao fombafomba mifandray amin' ny fanomezam-boninahitra ny razana, fa ny vehivavy kosa manao fombafomba mifandraika amin' ny fahavokarana sy ny herin' ny natiora. Tsy misy miala afa-tsy ny tera-bao, izay mitokana mandritra ny efatra andro; mijery ny fizotry ny fiterahana ny lehilahy ary manao fombafomba mifandraika amin' izany.
Ny Bara dia mpiompy omby. Mariky ny fananan-karena sy reharehan' ny mpanana azy ny omby. Raha mbola kely ny Bara dia mianatra sy manao tolon' omby sy moraingy ary ringa izay iomanana amin' ny ady. Ny ankamaroan' ny lanonana bara dia ankalazaina amin' ny dihy (indrindra ny dihin' ny papango ataon' ny olona iray mitsangana ambony tsatokazo) sy ny antsa ary ny mozika nentim-paharazana. Mamboly sy mihianana katsaka sy mangahazo ary vary ny Bara.
Ny fifanarahana dia atao amin' ny alàlan' ny fatidra. Ny Bara dia mipetraka amin' ny trano tany mahitsizoro izay miloko mena noho ny habetsahan' ny vy ao amin' ny tany. Amin' ny ririnina, ny habaka eo ambanin' ny andohalambo dia ampiasaina hanantonana sy fanamainana katsaka mba hotehirizina, hamidy na hambolena ny taona manaraka.
Ny fanehoana herim-po dia fototry ny maha-lehilahy ao amin' ny kolontsaina bara. Araka ny tantara, ny mpanjaka dia notakiana hitarika ny fandrosoan' ny ady, hametraka voalohany ny tenany amin' ny loza; ny hafa dia tsy navela hiaro azy na hanampy azy raha tsy hoe naratra na reraka. Anisan' ny mampiavaka ny kolontsaina bara ny halatra omby, izay fomba fanao mahazatra ho an' ny zatovolahy mba hanaporofoana ny hasarobidin' izy ireo sy ny herim-pony amin' ny fianakavian' ny ho vady sy ny fiarahamonina, voarara amin' izao fotoana izao io fomba fanao io saingy mbola miely patrana manerana ny faritra atsimo-andrefana sy atsimo-atsinanana misy ny Bara. Tsy afaka nanantena ny hanambady amim-panajana ny zatovolahy raha tsy nahavita nangalatra omby iray na roa, fara fahakeliny, tamin' ny fanafihana iray. Ankehitriny, ny mpangalatra omby (dahalo) dia mihamitombo hatrany, jiolahy mitam-basy mangalatra omby mba hahazoana harena fa tsy laza ara-piarahamonina. Ny tolon' omby dia fanatanjahantena fanaon' ny Bara ary ahitana omby atao ao amin' ny kianja iray ary karavasina mba ho sorena. Raha vao tezitra ny omby, dia nitsambikina ao an-damosin' ny omby ny mpilalao ary nitsambikina eo amin' ny vombony, niezaka ny mitaingina araka izay azo atao nefa tsy voaratran' ilay biby. Izy io dia heverina ho fomban-drazana ho an' ny zazalahy kely.
Ny Bara dia manana lovantsofina am-bava. Ny fedrà sy ny anganon' izy ireo dia miavaka amin' ny fampiasana fiteny mibaribary sy fohy. Ny rafi-pitantarana sy tandindona somary tsotra izay mibahan-toerana ao amin' ny fitantarana bara dia ampiasain' ny mpahay teny sy ny antrôpôlôga sasany ho fanombohana handinihana ny fivoarana sy ny fiovaovan' ny lovantsofina am-bava eto amin' ny Nosy. Malaza manerana ny Nosy ny dihy sy ny sary sikotra ataon' ny Bara. Ny sarivongan' izy ireo vita amin' ny hazo dia miavaka amin' ny fisian'ny volomaso lava vita amin' ny volo tena izy.
Araka ny fomban-drazana, nanenona landihazo ny vehivavy bara mba hanaovana akanjo ho an' ny tenany sy ny fianakaviany. Ny landihazo dia mbola otazana amin' ny tanana sy avalona ary tenomina amin' ny alàlan' ny ampela avo lenta. Ny kofehy vita amin' ny landihazo manta dia atsoboka amin' ny rano mifangaro fanalefahana alohan' ny fanenomana; alohan' ny hanalefahana dia atao hoe foly velo ilay kofehy ary inoana fa feno hery mahagaga; ny ombiasy dia mamatotra io kofehy io amin' ny hatotanan' ny olona mba hiarovana na hamehezana azy amin' ny vatan' ny mpandray anjara amin' ny lanonam-pamorana. Tsy dia mahazatra loatra ny akanjo vita amin' ny landy vokarin' ny bibin-dandy ao an-toerana izay mivelona amin' ny hazo tapia teratany maniry any amin' ny faritr' Isalo. Na dia marokoroko sy ratsiratsy kokoa aza io landy io raha oharina amin' ny vokarin' ny Merina na Betsileo, dia io no karazana landy tena sarobidy indrindra manerana ny Nosy noho ny fatezany. Tany amin' ny ilany atsinanana amin' ny faritanin' ny Bara, ny akanjo dia natao tamin' ny lamba hodi-kazo voakapoka na tsihy harefo (Eleocharis plantagines). Ny vehivavy dia nanao akanjo lava vita amin' ny tsihy roa na telo natohy amin' ny zaitra, izay afatotra mihantona amin' ny soroka na afatotra amin' ny andilany, matetika miaraka amin' ny tampony vita amin' ny mahampy (Lepironia mucronata) voatenona. Nanao lamba hodi-kazo voakapoka miaraka amin' ny akanjobe na akanjo vita amin' ny tsihy voatenona voazaitra ny lehilahy; ny akanjon' ny lehilahy antitra dia misy tanany.
Fahita any amin' ny Bara ny fanaovana ody, toy ny any amin' ny faritra hafa eto Madagasikara; Ny ody atao hoe tsimokotra dia namboarina amin' ny taolan-tongotry ny gidro mba hanala ny havizanana.
Toy ny any amin' ny faritra hafa eto Madagasikara, ny fiainana ara-piarahamonina ao amin' ny Bara dia fehezin' ny fady, izay matetika miovaova arakaraka ny saranga, ny vohitra, na ny fianakaviana. Any amin' ny tanàna bara sasany dia voarara ny mitondra entana irery; farafahakeliny olona roa no tsy maintsy mitondra azy. Ny fandrarana mahazatra manerana ny fiarahamonina bara dia ny manolotra sakafo na zava-pisotro ho an' ny olona amin' ny lovia na kaopy fampiasaina amin' ny fikarakarana ny hafa. Fady koa ny mandingana olona mipetraka na mandry amin' ny tany, manainga na mitondra entana eo ambonin' ny lohan' ny sasany na ny vatan' ny sasany, miraotra ny olon-kafa amin' ny lamban' ny tena, na mipetraka na miankina amin' ny fandrian' ny hafa.
Fady maro no mikasika ny andriana bara. Eo amin' ny fianakavian' ny mpanjaka zafimanely, ohatra, dia voarara ny mamono havana, eny fa na dia natao ho sazin-keloka be vava aza izany. Fady ny miresaka amin' ny vadin' ny mpifehy na ny miditra ao an-tranony, ary nisy toerana manokana natokana ho an' ny rehetra afa-tsy izy ireo ihany mba hanangonana kitay sy fanangonana rano. Ny fady mafy indrindra dia mandrara ny fanononana ny anaran' ny mpifehy na izay teny rehetra tao anatin' ilay anarana, aorian' ny nahafatesany. Omena anarana vaovao aorian' ny ahafatesany ilay mpitarika nodimandry, ka tsy maintsy ampiasain' ny rehetra izany, ary fantenana ny teny mitovy hevitra amin' izany mba hasolo ny teny mandrafitra ny anarany taloha mba hampiasaina amin' ny resaka andavanandro; na iza na iza manonona ireo teny voarara ireo dia faizina mafy, ary amin' ny toe-javatra sasany vonoina ho faty.
Ny Bara dia mandevina ny maty ao anaty lava-bato voajanahary, indrindra ao amin' ny Valan-javaboarin' Isalo, faritra heveriny ho masina; mandevina ny fatiny anaty zohy nandritra ny taonjato maro. Raha tsy misy lava-bato voajanahary toy izany, ny Bara dia manao fasana voarakotra vato eo amin' ny toerana lavitra ny tanàna. Mamangy ireo nidonam-pahoriana ao amin' ny tranobe manokana antsoina hoe "tranon' ny be ranomaso" ny mpisaona, ka ao ny vehivavy no mitomany sy maneho alahelo. Manapaka ny volony ny mpianakavy nidonam-pahoriana mba hanehoana ny fisaonany. Ao amin' ny Bara maro, ny vehivavy dia tsy alevina miaraka amin' ny vadiny sy ny zanany, fa alevina miaraka tamin' ny rainy na amin' ny toerana mitokana. Inoana fa ny fanahin' ny maty dia mijanona ho matoatoa, ka izany no nanosika ny olona hifindra tanàna vaovao aorian' ny fahafatesana.
Ireo mifandray amin' ny fahafatesana vao haingana dia hita ho feno karazana areti-mifindra mandritra ny fotoana fohy. Rehefa atao ny bilo na salamanga (izay samy fombafomba fanasitranana), dia manangana kiady eo anoloan' ny fidirana amin' ny trano anaovana ny lanonana ny ombiasy mba ho famantarana fa ireo maty havana vao haingana (ary koa na iza na iza vahiny ivelan' ny fiarahamonina) dia voarara tsy hiditra mba tsy hahavery ny herin' ny fanasitranana.
Ny dihin' ny Bara dia ahitana taratra ny fihetsiky ny omby ompian' izy ireo araka ny fomban-drazana nandritra ny taonjato maro. Ny dihy karitaky manokana dia fakana tahaka ny dakan' ny omby. Ny lokanga no zavamaneno mahazatra indrindra amin' ny Bara, misy tadiny telo vita amin' ny tsinain' osy na amin' ny tsiraka zavamaniry.
Ny Bara dia miteny amin' ny fiteny bara, izay fitenim-paritra amin' ny teny malagasy, izay sampan' ny vondrom-piteny malaiô-pôlineziana avy amin' ny fiteny baritô any atsimon' i Bôrneô.
Ny fiompiana sy fivarotana omby no asa fivelomana lehibe indrindra ataon' ny Bara. Tato anatin' ny folo taona farany dia nitombo hatrany ny firotsahan' izy ireo amin' ny fambolena, anisan' izany ny fambolena vary, mangahazo, ampemby ary katsaka. Ny vanim-potoan' ny fambolen-bary araka mahazatra dia amin' ny fahatongavan' ny papelika mifindra monina fantatra amin' ny anarana hoe kibondolo (coturnix communis).
Ny Bara sy Sakalava no tena mpivarotra andevo iraisam-pirenena teto Madagasikara tamin' ny fiandohan' ny taonjato faha-19. Ara-tantara ny ankamaroan' ny fanafihana andevo dia natao tamin' ny fotoana maina amin' ny ririnina. Nanomboka tamin' ny taona 1870, ho setrin' ny fitomboan' ny filana omby any Afrika Atsimo taorian' ny loza sy ny aretina mifanesy namotika ny omby teo an-toerana, dia nanomboka nanondrana ny ombiny tany ivelany tamin' ny alalan' ny seranan-tsambo any amin' ny morontsiraka atsimo toa ny any Toliara, Saint Augustin, Belo ary Soalara ny Bara.
Ny fivoaran' ny asa fivelomna izay tsy miankina amin' ny fifehezan' ny Fanjakan' Imerina, sy ny fahazoana fitaovam-piadiana takalon' ny omby, no nahafahan' ny Bara nanamafy ny fahaleovantenany sy nanohitra ny fahefan' ny Merina tamin' ny faramparan' ny taonjato faha-19, eny fa hatramin' ny fanafihana omby sy ny andevo tao ampovoan' Imerina - fanao izay nitombo indrindra taorian' ny taona 1882.
Ny Bara Ankandrarezina koa dia namboly tapia izay zavamaniry izay ataon' ny bibin-dandy teratany sakafo ny raviny; ny landy novokariny dia samy tenona eo an-toerana natao lamba ary naondrana manta tany Imerina.
Sinoa eto Madagasikara - Vazaha eto Madagasikara - Karàna
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bara&oldid=1043703"
Dernière modification le 9 Febroary 2022, à 07:54